Fanafihana sy fandrobana :: Ireo tokantranon’olona sembana sy malemy indray no lasibatry ny jiolahy • AoRaha
Tokantrano sivy no indray niharan’ny fanafihan-jiolahy mitam-basy teny amin’ny faritra Ambohimanarina, tao anatin’ny iray volana. Fantatra tamin’ny valin’ny fanadiha­diana nataon’ny polisy fa nosafidian’ireo olon-dratsy manokana ireo tokantrano ireo noho ny fisiana olona marefo ara-batana, manana fahasembanana sy malemy ary misy vehivavy mitondra vohoka. Tsy afa-manohitra
sy tsy manana hery amin’ izany iretsy farany, ka mora amin’ireo jiolahy ny fanatanterahana ny asa ratsy. Very tamin’ireo trangana fandro­bana miisa sivy ireo ny karazana entana sy vola. Niroso tamin’ny fikarohana ny mpitandro ny filaminana. Vokany, lehilahy enina no voasambotra, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Eo anelanelan’ny 18 taona hatramin’ny 25 taona ireo andian-dehilahy mpanao fanafihana eny Ambohimanarina ireo.
Mpanafika maherin’ny folo
Trano efatra no lasibatra, tamin’ny alin’ny 24 mey. Trano telo hafa indray no voatafika, tamin’ny alin’ny sabotsy lasa teo. Mano­didina ny dimy ambin’ny folo lahy ireo mpanafika. «Efa manana mpitsikilo manokana ireo jiolahy ireo, ka mijery ny trano misy olona marefo izay hotafihina. Lehilahy enina no voarohirohy tamin’ny fanafihana, tamin’io sabotsy io. Nandà hatramin’ny farany izy ireo saingy nanamarina sy nanamafy ireo lasibatra fa ry zareo no niditra an-keriny nanafika tao an-trano. Efa nisy voatazona am-ponja ihany koa ireo voatondro ho nanafika tamin’ny volana mey », hoy ny kaomisera Andriatianiaina René Rolland lehiben’ ny
borigady misahana ny heloka bevava (Bc) etsy Anosy. Nanampy ny mpitandro ny filaminana tamin’ny fahatrarana an’ireo olon-dratsy ny fanomezam-baovao nataon’ ny mpiara-monina. Fantatra fa mpibata entana sy mpanasa fiara eny an-toerana ihany ireto jiolahy.
Fanaparitahana laza adina bakalorea Naiditra am-ponja ilay talen’ny Ofisin’ny Bakalorea teo aloha
Jiolahy teny Itaosy
Loza teny amin’ny RN2
Famonoana ankizy :: Vehivavy iray voasambotra tamin’ ny fahafatesan’ilay zaza, 11 taona
Hosoka :: Olona telo naiditra am-ponja fa voarohirohy amin’ny vola sandoka